Ha laacine hoos ka doon!! Faalo Wariye Dhaaley
26 June 2013 Waagacusub.com-Beesha Rug qura ku wada sugan oo Soor iyo Saldhigba wadaagta ayaa ah tan ugu dhaw ee ay la gudboontahay inay dhowrato Ma-seegtada Danta ah ee ka dhexeeysa!! Waxaase Hacooy iyo Hal-doorkuba ay ku kala baxaan hadba sida ay ugu hiiliyaan Howsha la wadaago oo ay Hagrashada Howl-wadeenka gudaha iyo Hagar-daamada Nacabka banaankaba ugaga hiiliyaan!!
Soomaalida sidii lagu yaqiinay Dhaqankeedu, waxay ahayd Umad ku ad adag ilaalinta Danaha Deegaanka lagu noolyahay iyo Dadkiisa.
Si kasta oo ay Dadkeenu Beel-Beel isugu diriraan oo Xoolaha isaga dhacaan, isuna laayaanna, ma ay dhici jirin inuu Qof quraahi Cadaw usoo horkaco Deegaanka uu usoo Hoyaad tago si loo gumaado loona waxyeelo Dadkiisa.
Waa iska Xaal Aduun iyo Xiligoo socdaye, waxaan arkeynaa Waqtigan Soomaalidii oo kala jeesatay!!
Midbaa u Sacab tumaya Nin meel kore kasoo socda oo loosoo hogaaminayo inuu Deegaankii Wadaagga ahaa ee Soomaaliyeed uu Gabaad ka helo, isagoo waliba usoo maraya Dhabbo uu ku waxyeeleynayo Dad Soomaaliyeed.
Waloow ay Qormadan koobani tahay mid Danteedu ay iska cadahay lana wada garan karo, hadana aan sii iftiimiyee waxaan ka sheekeynayaa Is-qabqabsiga cusub ee dhawaantan kasoo muuqanayay Deegaanadii Soomaaliyeed ee Dalkeena mugga wayn ku dhex lahaa oo Jubooyinka la oran jiray.
Dad Soomaaliyeed oo kala baxay ayaa midba kan kale ka riixanayaa Dhulkaas ay Soomaalidu leedahay. Waxayna isku dhaleeceynayaan soo galootinimo iyo inaanay Deegaanka Xaq u lahayn!!
Kabasii yaab badane waxaa barbarkooda taagan Nin Shisheeye oo qaar Soomaalida ka mid ah ula muuqda mid iyaga la safan oo Dantooda xaqiijinaya, dhinaca kale ee iyaga ka horjeedana ay rumeysteen inuu Midkaasi u heelanyahay ka dhabeeynta Himilooyinka ay dhinacyada kale leeyihiin!!
Xaashaaye anigu sidaas uma arag!! Si fududana waxaan u leeyahay, Soomaali meelna kuma kala tagto, ineey iyada is firdhiso oo ay kala jeedsato mooyee!!
Dal ama Dowlad Shisheeye oo Soomaalida ay ugu kala baxsanyihiin Cadaw iyo Saaxib ma malaynayo inay jirto!!
Xitaa Dalalka Gacanta ku haya Qaybo Dhulka Soomaalida ka mid ah sida Itoobiya iyo Kenya ayaa dhabtii ka dharagsan inay Soomaalidu yihiin isma-dhaanto aan is doorin oo Deegaan, Diin, Af, Dhaqan iyo wax kastaba wadaaga.
Markaa waa hungoow iyo hilinkii toosnaa oo laga habaabay hadiiba la yiri Soomaalida is heysataahi iyaga dhexdooda Cadaw is dirirsan u kala baxay, Garbahana qabsaday Shisheeye si Niyad ah u aaminsan midnimada iyo kala duwanaasho la’aanta Soomaalida.
Tusaale waxaa ii ah Ciidamada Shisheeye ee Xamar jooga oo Dowladda Soomaalida la safan, waxaa ka barbar dirira Askar Soomaaliyeed, waxaana ka horjeeda oo Rasaasta kusoo rida Soomaali kale!!
Waxaa hubaal ah marka Safafka Dagaalka la joogo inaanu Askarigan Dal kale u dhashay ee dhawaan un halkan soo galay si fudud u kala garan karayn kuwa la diriraya iyo kuwa Jaalkiisa ah!!
Ninkan Shisheeye marka uu arko Soomaaliga isaga la safan oo si Daacadnimo leh Rasaasta ugu ridaya dhanka uu Shisheeyahani bartilmaameedsanayo, ayuu ku qancayaa in kan isaga la jiraahi uu midkan dhiniciisa taagan yahay, Cadawguna halka hore kasoo jeedo.
Tan ugama dan lihi inaan dhiirigalinayo Alshabab ama cid kasta oo Dowladda Soomaalida ka horjeeda. Waase hoga-tusaaleeyn aan ugu tala galay inaan ku hanuuniyo Halyeeyada Dalkeeyga oo aan Halkii qumaneeyd Hubka u sidane iyaguun is hiifaya!!
Kenya iyo kuwa la midka ah ee Shisheeye hadii ay Dalkeena u joogaan Nabad-ilaalin sida ay sheegayaan, waa inaan inagoo Heeybteena Dadnimo kor u qaadeyna u sheegnaa inaan Garab istaagooda kaliya u kaashanayno inaan ku helno waxa aan anagoo Soomaali ah hiigsanayno oo Dowlad awood leh iyo Midnimo waarta ah.
Kolkaa haduu Shisheeyuhu taas ka raali noqdo oo inalasii shaqeeyo waa sidii Sharafta inoo ahayd ee la rabay!! Haduu diidase usii duleeysnaan meeynee Dalka inagaa leh oo Dantiisana garanayna!!
Laakin ma aha in Shisheeyuhu uu inoo sheego Shirqool uu Awoodeena ku kala shaandheeyno, mid kastana uu Sheeda uga Gacan haatinayo sida inuu isaguun la hadlayo oo aanu dooneyn cid kale!!
Dhulkan idinkaa lahaa illaa aad dhalateen. Waanad laahanaysaan ilaa aad dhimataan!! Sidaas baad Sanado badan usoo wada saarneeydeen Faraskan cararayaa ee Dalkiinii dusha sare ku sida!!
Kaxeeynta Faraska iyo u Sal-dhigistiisana waxay ahayd howl uu mid kastoo idinka mid ihi Sadkiisa ka qaadanayay, xitaa hadii gooraha qaar kuwo idinka mid ahi saluugayeen Sooryada inta ay ka heleen!!
Baraaro iyo barwaaqo aad ku wada Caano-maashaan waxaad ku heli kartaan iyadoo ay Beeshu Nabad ku dagto, waxa aad Dhexdiina ka heli kartaana Dhul kale aan loo doonan ama Nin idinka dheeri la waydiin, kaasoo aan dhibtiina mooyee wax dheef ahi idiin quurin!!
Dib u saxa Qaladaadkiina oo garta in Maamulka Dhulkiinu aanu ahayn wax Maalin qura ama Waqti kooban ku eg ee uu yahay mid sii jiri doona Qarniyo dambe.
Qof kasta haku qanco inuu Maalin uun Nasiibku u saamixi doono inuu Sadkiisa ka qaato Maamulka isagoo Dadnimo Sharaf leh iyo Madax-banaani huwan oo aan Maquuno shisheeye ku hoos jirin.
Hadiise midkiin uu maciin bido Xaalad kooban oo inta ay sii jireeyso aan la garanayn inuu uga faa’ideysto si uu Wadaanta Ceelka kaligiis u darsado iyadoo Walaalihiina Indho Haraad iyo Gaajo dilootay kusoo eegayaan, Shaki kama jiro inaanu Ladnaanta beenta ah ee uu is tusinayo iminka kusii ladi doonin.
Ninka aad Maanta Lagado, waxaad ka fili doontaa Laqdabo iyo inuu Lugooyada kuu maleego , ee ma badna inuu kuu Laab furnaado oo uu lilaalahi kuugu adeego!!
Dusha sare kan idinkaga Gacan haatinaya ha usii Indha taagina, hana laacina Hoobaanta beenta ah ee uu idinsoo laalaadinayo.
Waa dabin la idinku dagayo si aad u ahaataan Dib-jiro Dayoobay oo intii ay isku duubnaan lahaayeen iyaga un is dila, illaa marka dambe Dal iyo Deeq wixii aad laheeydeen uu Shisheeyuhu Duur cidla ah uga qaato.
Qormadeeydii halkaas baan ku sar-gooyay, Samo iyo wanaagna waan idinku sagootiyay. Saaxiibada yar saluugay Hadalkeeygana Si kasta ku Raali ahaada!!